Midowga Afrika oo xannibay Koonfurta Suudaan – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Midowga Afrika oo xannibay Koonfurta Suudaan
Midowga Afrika oo xannibay Koonfurta Suudaan
Ururka midowga afrika (AU) ayaa ka joojiyay South Sudan hay’ad ka shaqeysa qaaradda kadib markii Juba ay bixin weyday tabarucaadkii sanadlaha ahaa oo gaareyso in kabadan 9 milyan oo doolarka mareykanka ah.
Howlgalka South Sudan ee Ethiopia wuxuu warqad u qoray wasaarada arimaha dibada ee wadanka arbacadii isagoo ku wargaliyay dowladiisa in wadanka bari ee bariga afrika cunaqabatayn la saaray kadib markii ay ku fashilantay inay bixiso tabarucaad lacageed sedex sano oo xiriir ah.
Wasaaradda Arimaha Dibadda ayaa Jimcihii xaqiijisay joojinta South Sudan ee ka saarida hay’adda madowga Afrika.
Hakim Edward, oo ah kuxigeenka Afhayeenka Arimaha Dibada, ayaa sheegay in cunaqabateyntu aysan u diidaynin South Sudan xubinimadeeda AU laakiin ay kaliya ka joojiso ka qeyb galka shirarka AU.
“Waxaan jeclaan lahayn inaan u xaqiijino dadweynaha in South Sudan ay ka mid tahay waddamada ay cunaqabateyntu saartay midowga Afrika sabab la aan darteed tabaruca dhaqaale oo sanadle ah,” ayuu Edward ku yiri bayaan uu soo saaray habeenimadii Jimcaha.
“Wasaaradda arrimaha dibaddu waxay jeclaan lahayd inay shacabka u xaqiijiso inay la shaqeyneyso wasaaradda maaliyadda si arrinta loo xalliyo AU oo keliya laakiin laamaha kale ee gobolka,” ayuu raaciyay.
Koonfurta Suudaan waxay noqotay xubintii 54aad ee Midawga Afrika bishii Juulaay 27, 2011.
Previous articleDadkii ugu badnaa oo laga helay maalin kaliya covi19 Itoobiya
Next articleAfrican Sahel wars force 1.7 million people to flee
Kadib weerarkii Aramco, Pentagon wuxuu isku dayayaa hub cusub oo looga...
New Zealand oo mar kale maanta uu ka dhacay kala carar...